टिप्स Archives - नमस्ते खबर
विभिन्न टिप्स हरु सम्बन्धि लेखहरु
कुन राशिको महिला/पुरूष कति सेक्सी , जानिराख्नुहोस्
काठमाडौं । हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो । यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका अपनाउन मन पर्छ । कसैलाई कामुक कुराकानी मन पर्छ भने कसैलाई एक अर्कालाई हेरे मात्र पुग्छ । ज्यौतिषशास्त्रका अनुसार यौनिक ब्यवहार फरक हुनुको कारण राशि हो । मेष…
तपाईंले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ५ कुरा के के हुन् ? जानी राख्नुहोला धेका खानु पर्दैन
February 3, 2018 joes_limbu joes_limbu
मेरो नाम सतीश हो । काठमाडौंको बासिन्दा हुँ । सम्पन्न पनि छु । अहिले ४७ वर्षको भएँ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा मेरो अनौठो अनुभव छ । त्यो के भने मसँग लामो समय मानिस संगत गर्न चाहँदैनन् । रुप, गुण, सम्पन्नता भएर पनि किन मानिसहरुसँग लामो सम्बन्ध कायम रहँदैन ? गुण भन्नुस् वा अवगुण, म खुल्ला छु । मित्रता भएपछि घर–परिवारका मात्र होइन, आफ्ना अन्तरंग कुराकानी पनि गर्छु । श्रीमतीका अनुसार मेरो यही अति खुल्लापनले नै मेरा साथीसँगीसँग लामो सम्बन्ध कायम नभएको हो । के यो सत्य हो ? मानिसले आफ्ना…
November 24, 2017 November 24, 2017 namestekhabar
रोजगारीका लागि करिब ९ वर्ष अघि कोरिया आएका एक नेपाली युवाले कोरियन भाषा अध्यन सम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसन तयार पारेका छन्। कोरियाको छाल्लानाम्दोस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत चितवनका पवन सिलवालले उक्त एप्लिकेसन तयार गरेका हुन्। कोरियन भाषा अध्यनमा सहज हुने उक्त एपमा धेरै जसो कोरियन क्रियापदलाई नेपाली भाषामा उल्था गरिएको छ। कोरियामा कामको बाबजुत पनि बचेको समयलाई सदुपयोग गरि करिब ६ महिना लामो प्रयास पछि उक्त एप्लिकेसन तयार पार्न सफल भएको बताए। आफूले कोरिया बस्दा सिकेको भाषिक ज्ञानलाई सबैको सामु प्रस्तुत गर्न पाउदा अत्यन्तै खुसी लागेको सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा सिलवालले बताए। कोरियन भाषा…
टिप्स सबै समाचार